Saraakiil ku dhimatay Dagaal Saaka Dhacay Deynuunaay – Radio Baidoa
By Webmaster	 On Aug 5, 2020
Dagaalkaan oo geystay khasaaro kala duwan ayaa waxaa uu ka dhacay degaanka deeynuunaay ee Gobolka Baay, waxaana uu u dhaxeeyay Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay ku sugan degaankaas iyo Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid, kadib markii Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay werareen degaanka Deeynuunaay,waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo dhex-maray Ciidamada Dowladda & Al-Shabaab.
Dadka degaanka qaarkood oo Radio Baydhabo la hadlay ayaa waxaa ay sidoo kale sheegen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen, hayeeshee ilaa iyo hadda aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Al-Shabaab ayaa warar lagu qoray Baraha internet-ka ee taageera waxaa ay ku sheegeen inay la wareegeen deegaanka Deeynuunaay ee gobolka Baay,
Ciidamo Gurmad ahaa oo ka Ambabaxay Magaalada Baydhabo yaa iyaguna lakulmay miinooyin ay Dhulka ku Aaseen Alshabaab,
Waxaana halkaasi waxyeello ay ka soo gaartey Taliyaha Guutada 8aad Qeybta 60aad ee CXD iyo Saraakiil kale iyo Ciidamo kale .
Taliyaha Guutada 8aad Qeybta 60aad Gaashaanle Maxamed Isaaq Xasan oo markii hore dhaawaciisa cuslaa ayaa markii la soo gaarsiiyey Baydhabo u Geeriyoodey.
sidoo kale waxaa jira Sarkaal sare oo katirsanaa Ciidanka Daraawiishta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed oo isna ku geeriyoodey Dagaalka ka dhacay Deegaanka Daynuunaay Yuusuf Boorweyne.